Rallye VMRC: mpanamory miisa 14 hifaninana | NewsMada
Rallye VMRC: mpanamory miisa 14 hifaninana
Nifarana ny asabotsy lasa teo ny farafisoratana anarana amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara 2019 eo amin’ny Rallye virtuel. Efa nosokafana tamin’ny “VMRC Opening Round 2019” ny fifaninanana izay natomboka tamin’ity herinandro ity.
Misokatra ny taom-pikatrohana 2019 ho an’ny Rallye virtuel eto Madagasikara. Efa nanomboka omaly alatsinainy ny fifaninanana amin’ny tompondaka nasionaly ary hifarana ny volana oktobra 2019 izany. Araka ny fe-potoana nomen’ny mpikarakara, ny asabotsy lasa teo no daty voatendry hanaterana ny antontan-taratasy hisoratana anarana ka mpanamory miisa 14 no tonga nahatonga izany tamin’ny alalan’ny mailaka. Mbola saika tafiditra ao anaty lisitry ny mpifaninana avokoa ireo mpanamory kalaza sy tompondaka tamin’ny taon-dasa toa an-dry Hoby sy ry Nirs.
Raha tsiahivina, fifaninanana miisa 9 no miandry ireto mpanamory ireto amin’ny fifaninanam-pirenena 2019 ity. Aorian’ny lalao fanokafana, hifarana ny alahady izao, hiditra amin’ny “East Racing Tamatave Rally” indray ireo mpifaninana manomboka ny 18 febroary izao. Hisesy handray ny fikarakarana ny lalao amin’izay aorian’izany ireo klioba mivondrona eo anivon’ny federasiona mandra-pahatonga ny “Final Round”. Ny klioban’ny Team So6 Rally no hisantatra izany. Araka ny loharanom-baovao, klioba anisan’ny hikarakara ihany koa ny Asacm sy ny Asa Tana amin’ity taom-pilaolaovana 2019 ity.
Lisitry ny mpifaninana, VMRC 2019
Ralahy Andriantsaina Hoby (Mitsubishi Lancer Evo X R4), Ralahy Solofonirina Nirisaina ((Mitsubishi Lancer Evo X R4), Jedita (Mitsubishi Lancer Evo X R4), Francky Omer ((Mitsubishi Lancer Evo X R4), Randrenjariveloson Sedra (Mitsubishi Lancer Evo X R4), Tom Jobim (Mitsubishi Lancer Evo X R4), Ben Rems (Mitsubishi Lancer Evo X R4), Raharinosy David Tjn (Subaru N15 R4), Razafindralambo Naly (Ford Fiesta S1600), Andrianarisaona Finoana Mendripiderana (DS3 R3 MAX), Ranaivoniarivo Mino Fenohasina (208 R2), Razafindramparany Cecilien (DS3 R3 MAX).